Howlgalka Al-Shabaab looga saarayo Gobolka Mudug | KEYDMEDIA ONLINE
Howlgalka Al-Shabaab looga saarayo Gobolka Mudug
Dhulkoo aad u ballaaran iyo awoodda Ciidanka oo isku xirnayn ayaa siinaysa Kooxda Al-Shabaab fursado ay dhaq-dhaqaaq ku sameyso.
GAALKACYO, Soomaaliya - Ciidanka DF iyo kuwa Galmudug ayaa Todobaadyadii ugu dambeeyay howlgallo ka wadey Koonfurta Gobolka Mudug, iyagoo isku dayaya inay Al-Shabaab ka saaraan degaanada ay ku sugan tahay kahor inta aysan billaaban doorashadda Soomaaliya.
Meelaha sida aadka howlgallada uga socdaan waxaa kamid ah duleedka degaanadda Bacaadweyne iyo Wisil, oo Al-Shabaab ku xoog badan tahay, waxaana ka dhacay dagaallo iyo Qaraxyo dhiig badan ku daatay iyo barakac xoog leh.
Waxay Ciidamada huwanta ah ay sameynayaan dib u gurasho meelaha qaar, sida inay kasoo baxeen Todobaad kahor Bacaadweyne maalin kadib markii ay Al-Shabaab ka saareen, taasoo dhabar-jab ku noqotay dedaallad socda ee lagu xoreynayo goobaha ka maqan gacanta dowladda.
Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in howlgallada laga gaarey guulo la taaban karo, isagoo ugu baaqey shacabka Mudug inay ka qeybqataan xoreynta degaanadda xoogga ku haysato Al-Shabaab iyo sidii la isaga dul-qaadi lahaa dhibaatada Kooxda dadka ku haysay mudada ka badan 10-ka sano.
Fiqi ayaa hoosta ka xariiqay in dhowr Tuulo ay Ciidanka la wareegeen, islamarkaana ay sii wadi doonaan duulaanka inta Al-Shabaab looga ciribtirayo Mudug, oo meesha ugu badan ay argagaxsadda uga gudubto Puntland kadib markii Koonfurta dhul badan laga saarey.
Ciidamada Daraawiishta Galmudug iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa waxay fashiliyeen Shalay qarax gaari oo lala damacsanaa saldhig ay ku leeyihiin duleedka Bacaadweyne, kadib markii ay toogteen dawaralka.